I-Semalt iveza ukuthi i-CTR ihlobene kanjani nekhasi lakho lekhasi
Wonke umuntu othanda ukuphumelela ekukhangiseni kwe-intanethi angase azibuze umphumela wezinto eziphilayoisilinganiso sokuchofoza-nge-CTR). Njengabadayisi nabantu ngabanye benza ukuhlaziywa komkhuba, zama ukukhipha izincintisana zakho ngokulandelaIzimo ze-SEO. Kodwa-ke, amakhophi we-Google namakhophi aphikisanayo ahlale engaziwa ngokushesha nje uma engabonakali indlela ye-algorithm yabongokuvulekile. Kodwa lokho esikwaziyo ngokuqinisekile ukuthi i-CTR ithinta isamba njengento engacacile - fondos infantiles para fotografias digitales dia.
Nokho, izitayela zokumaketha kwe-inthanethi ziletha isithombe esihlukile. Ngokwesibonelo, izilawuli ze-CTRIzici zesilinganiso se-Google. Abadayisi abaningi be-digital bazama ukusebenzisa okuningi kwalesi sici. Kulesi sihloko, uJason Adler, Impumelelo yoMthengiUmphathi we i-Semalt yembula umehluko ophakathi kwe-CTR nokusezingeni, uchaza ukuthi baxoshwa kanjani. Kukhona namathiphu abalulekile azosiza wenaIsilinganiso sokuchofoza se-Google (CTR) senza kahle kuma-SERP ephilayo.
Ukuthi ukuthonya kwe-CTR kufaka kanjani
Ukubeka amawebhusayithi amazinga, kumele kube nemigomo yokubeka amawebhusayithioda. Ngakho, i-Google isebenzisa ulwazi olufana nokuchofoza idatha. I-CTR ithinta izinga lokuchofoza lemiphumela ye-SERP. Ngenxa yalokho, amawebhusayithi anamakhulu kakhuluinombolo yokuchofoza ihlelwe phezulu, kuyilapho labo okuchofoza okumbalwa bebekwe phansi. I-Algorithm isethwe ukucubungula okuqukethwengenani elikhulu lokuchofoza okufanele..Izinjini eziningi zokusesha zisebenzisa le nqubo ekusetshenzisweni kwabo kokusebenza. I-Google iseluleka kubakhulogiukuze kube ngukubaluleka kokuqukethwe kokuqukethwe. Njengoba okuqukethwe kuthola okuqhubekayo, ukuchofoza kwenzeka. Lokhu ukuchofoza kwenza i-website ithole umvuzo omuhle kakhuluukulinganisa ngakho-ke kuthuthukisa imiphumela yakho ye-SEO.
Okwesibini, i-Google incike ku-CTR njengendlela yokubonisa i-OneBox. AIwebhusayithi kufanele ibe ne-CTR encane ukuthola i-OneBox kuwebhusayithi yabo. I-Google inesistimu ezenzakalelayo ehlola amazinga okuchofoza(CTR) ngombukiso ngamunye we-OneBox. Lesi simo singase sichaze ezinye zezinguquko zonyaka ngezibalo ezithileiwebhusayithi noma ikhasi. Isibonelo, ikhasi lewebhu lingenza kahle namhlanje kodwa hhayi ukuthi liphumelele kusasa. Ngenxa yalokho, abathengisi be-digitalkufanele basebenzise ukufaneleka njengento ebalulekile. Ukulondoloza i-CTR yakho kungagcina i-website ibekwe kahle kahle ezinjini.
Iwebhusayithi kufanele ibe nokuchofoza okuhloniphekile ngezinga. Ukubandakanya kwesayithi kubalulekilengolwazi oludinga ukulingiswa. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi abantu abachofoza isixhumanisi kuwebhusayithi yakho bahlanganyele nayoisikhathi esiningi. I-CTR ithuthukisa igunya lakho lekhasi ngokuhambisana, okuthuthukisa isimo sakho. Ukuze i-CTR ibe nenzuzo enkulu kakhulungaphandle kwe-SEO, umuntu udinga ukuhlela okuqukethwe kwewebhusayithi kahle ngezihloko namathegi we-meta. I-Google ihlanganisa amawebhusayithi ngaphandle kokubaluleka kwakhookuqukethwe. Okuqukethwe okukhulu kunokuchofoza okuphezulu ngesilinganiso. I-algorithm ye-Google isebenzisa lesi sici ukuhlukanisa ukuthi iyiphi indawo ethileindawo efanelekile.
Abathengisi be-intanethi bangaphikisana ngokungapheli ngokuthi ngabe i-Google CTR inomthelelaimiphumela yokusesha injini noma cha. Iqiniso liwukuthi i-CTR, impela, isiza iwebhusayithi ukuba ibekwe ephakeme. Noma kunjalo, kungase kube nzima ukuqonda ubuhlobophakathi kwe-CTR ne-SEO. Sithemba ukuthi lesi sihloko sikusize ukuba uqonde ubuhlobo phakathi kwalezi zinhlangothi ezimbili nezindlelaungenza ama-rate akho we-Google aqhafaza ama-rates (CTR) enze kahle kuma-SERP aphilayo.